‘ပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးပါ’ တဲ့… လှပလိုက်တဲ့ စကားလုံးလေး
ကိုကို့ရဲ့မျက်လုံးတွေက မပြယ်ပျောက်သေးတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ အရောင်တောက်နေပေမဲ့
ကျမကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
‘မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး … ကိုကို့ကို ကျမ မချစ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး….
ဒါပေမဲ့ ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုလတ်ကိုပဲ လက်ထပ်မယ်’
မိုးတွေသည်းသည်းထန်ထန်ရွာနေတဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ကိုကိုနဲ့ကျမ စတင်ဆုံစည်းခဲ့တယ်.
အဲ့ဒီနေ့က မဖြစ်မနေ အင်တာဗျူးတစ်ခုကို သွားဗျူးပီး အပြန်ပေါ့.
သွားဗျူးတဲ့ အန်ကယ်ကြီးက မိုးတွေသည်းနေတယ် မပြန်ပါနဲ့ဦးလို့ တားပေမဲ့
ကျမက ဒီသတင်းကို ရုံးကို အချိန်မီပြန်ပေးရမည်.
ကားလမ်းဖြတ်ကူးဖို့ ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျမရဲ့ထီးကိုရော ကျမလက်ကိုပါ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အရှိန်နဲ့ ကျမ ပလက်ဖောင်းပေါ်ကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်. ဒေါသက ထောင်းခနဲ ထွက်ပီး မျက်နှာကို သည်ဘက်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ကျမရဲ့ဘေးကနေ ဝေါခနဲဖြတ်သွားတဲ့ ကားတစ်စီးရဲ့ အရှိန်ကို သတိထားလိုက်မိတယ်.
ကျမ ရုတ်တရက်လန့်ဖျတ်ပီး အော်လိုက်မိမလိုဖြစ်ပေမဲ့ ပြန်လှည့်ကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမရဲ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ခဲ့တဲ့လူကို ရှာမတွေ့တော့. မိုးရေတွေကြားထဲမှာ အရောင်စုံထီးတွေရဲ့ ကြားထဲမှာ ကျမရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကို ရှာတွေ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့.
ရုံးကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမ တစ်ကိုယ်လုံးကြွက်စုတ်ဖြစ်နေခဲ့ပီ. သူ လှမ်းဆွဲခဲ့သည့် လက်ဖျံပေါ်မှာ သူ့လက်က တစ်ခုခုနဲ့ခြစ်မိသည့် ဒဏ်ရာတစ်ခု ကျမရခဲ့သည်. ကျမ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတော့ သူက စုတ်တသပ်သပ်နဲ့ ကျမကို လမ်းသွားတိုင်း ဘေးဘီဝဲယာကို ဂရုစိုက်ဖို့ တတွတ်တွတ်ပြောနေခဲ့သည်.
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဧည့်ခံပွဲတခုကိုအသွားမှာ ကိုကိုနဲ့ဆုံခဲ့တယ်. ကျမက ကိုကို့ကို မသိပေမဲ့ ကိုကိုက ကျမကို အသေအချာသိနှင့်နေခဲ့သည်. အဲ့ဒီပွဲမှာ ကျမနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ GM ကိုမင်းလွင်က သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် အထက်အရာရှိလဲဖြစ်တဲ့ ကိုကိုနဲ့ ကျမကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်သည်.
“ဒါ People Voice သတင်းဂျာနယ်ရဲ့ သတင်းထောက် မိုးည.”
“မိုးည ဒါ အကို့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း သတိုးဇင်.
သူက အခုပွဲရဲ့ စပွန်ဆာလေ. MD ပေါ့. ညည်းသိချင်တာတွေ သူ့ကို ဗျူးလို့ရတယ်နော်.”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်.”
“ကိုလဲ မင်းကိုတွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်.”
ကိုကို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက တောက်ပလွန်းလှသည်. ကျမက ကိုကို့ကို ပထမဆုံးအမြင်မှာပင် သဘောကျသွားခဲ့သည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်လွန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပိုင်နိုင်မှုကို ကိုကို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ ခနတွင်းချင်း ကျမ ဖတ်မိခဲ့လို့ဖြစ်သည်.
ကိုကိုက ကျမ သိချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သေသေချာချာ ပြောပြနေခဲ့သည်.
ကျမ မေးခွန်းတခုမေးတိုင်း ကိုကိုက အရင်ပြုံးပီးမှ ဖြေခဲ့တယ်.
“မင်းက သိပ်ထက်တဲ့ သတင်းထောက်ပါလားကွ. ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေ မေးတာကို ကိုတော့ သိပ်သဘောကျတာပဲ”လို့ ကိုကိုရဲ့ ချီးမွမ်းသံကို ကြားရတဲ့အခါ ကျမက ရှက်စနိုးဖြစ်သွားမိတယ်.
ကိုကို့ရဲ့ အကြည့်တွေကို ကျမ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်လာပီး ဖျော်ရည်ခွက်ကို လက်လှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျမလက်က အနာကို ကိုကို မြင်တွေ့သွားခဲ့တာလေ.
ကျမ ရုတ်တရက် အံ့အားတသင့်နှင့် လက်ကို ယောင်ယမ်းငုံ့ကြည့်မိသေးသည်.
သူက ကျမလက်ကို လှမ်းဆွဲတော့မလို့ ဖြစ်ပီးမှ သူ့လက်စွပ်ကို သူပြန်ကြည့်နေခဲ့သည်.
“ကို့လက်စွပ်နဲ့ခြစ်မိတာ ဖြစ်မယ်…” သူ့ရဲ့စကားသံကြောင့် ကျမ အံ့သြသွားခဲ့သည်.
ကျမ အံ့သြသွားတာကို သူက ကြည့်ပီး ကျမကို ပြုံးပြကာ စကားစပြောခဲ့သည်.
“အဲ့ဒီနေ့က မင်းကို ကိုယ်တွေ့တယ်. မင်း ကားလမ်းဖြတ်ကူးမလို့ပြင်နေတုန်း မင်းလက်ကို ကို လှမ်းဆွဲလိုက်တာ. “
ကျမတို့နှစ်ယောက် အဲ့နေ့က အကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းပြောရင်း ကျမကို နမော့်နမဲ့နိုင်တယ်လို့ ဆုံးမတာကို ကျမက ရယ်ချင်နေခဲ့သည်. အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ကျမကို ကိုကိုက ထိန်းချုပ်ခဲ့ချင်တာ ဖြစ်သည်.
နောက်တနေ့ ကျမအတွက် ဖုန်းလာတယ်ဆိုလို့ ပြေးကိုင်မိချိန်မှာ မထင်ထားတဲ့ ကိုကို့ရဲ့ဖုန်း ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့.
“ကော်ဖီသောက်ချင်လို့ လမ်းထိပ်က ကော်ဖီဆိုင်မှာ စောင့်နေတယ်… ကို့ကို ကော်ဖီလာတိုက်ပါ”လို့ ပြောတာကို ကျမက အံ့သြဝမ်းသာမိတယ်. ကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုကိုက ကျေနပ်ပြုံးနဲ့ ကျမကို ပြုံးကြည့်နေခဲ့တယ်. အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ကိုကို့ရဲ့ အမိန့်တွေ လိုအပ်ချက်တွေကို ကျမက အလိုလို လိုက်နာခဲ့တာဖြစ်တယ်.
နောက်တော့ ကိုကို့ဆီက ဖုန်းသံတွေ ကိုကိုနဲ့အတူ ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်ခွင့်တွေကို ကျမ မက်မောလာမိတယ်. ကိုကို့ဆီက စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ကျမက မသိစိတ်ထဲကနေ မငြင်းဆန်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့.
“သိပ်ချစ်တယ် မိုးကို ကို ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကို ညတော်တော်မိုးချုပ်နေတဲ့အချိန် ဖုန်းထဲကနေ ပြောခဲ့တာဖြစ်သည်. ကျမက ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘဲ တိတ်တဆိတ်ဆွံ့အလို့ပေါ့.
“ကို့ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လား… မိုး ကို့ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လား” တတွတ်တွတ် ရေရွတ်နေတဲ့ ကိုကို့ရဲ့စကားသံတွေကို ကျမက ကျမကိုချစ်စိတ်ကြောင့် ကိုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောနေတယ်လို့ သတ်မှတ်မိပီး ခေါင်းညိတ်မိခဲ့တာဖြစ်သည်. သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ် ကိုကို. အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေ ပေါ့….
“ကိုတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာကို လူတွေ မသိစေချင်ဘူး မိုးရယ်… ဘာလို့ဆိုတော့ မိုးကို သူများတွေ စပ်စုမှာကို ကိုမလိုလားဘူး နောက်ပီး ကိုကိုက မိုးကို ကိုကိုတို့ စေ့စပ်တဲ့နေ့ကျမှပဲ လူသိရှင်ကြားကြော်ငြာချင်တယ် နို့မို့ဆို သတိုးဇင်ရဲ့ ချစ်သူဆိုပီး မိုး စိတ်ညစ်ရလိမ့်မယ် သိလား.. မိုးကို ဘာအတွက်နဲ့မှ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူး ချစ်သူရဲ့…”
ကိုကိုရဲ့ စကားတွေကို ကျမက အကန့်အကွက် မရှိခဲ့ဘူး. ကျမရဲ့ ချစ်သူက ကျမအတွက် ချစ်သူသာ ဖြစ်ပီး. သူ့ကို နာမည်ကြီးကုမဏီရဲ့ MD တစ်ယောက်အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ သာမန်မိန်းကလေး မိုးညရဲ့ချစ်သူသာ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာမို့လေ.
ကိုကိုက ကျမကို သိပ်ချစ် သိပ်မြတ်နိုးခဲ့တယ်. ကျမရဲ့ ချစ်သူက ကျမကို သိပ်ချစ်တယ်. သိပ် သဝန်တိုတယ်. သိပ်အလိုလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုး ကျမကို ခံစားမိလာတဲ့အထိ ခံစားမှုတွေ မထပ်စေရဘဲ ကိုကိုက ကျမကို ချစ်ပြခဲ့တာလေ. ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ကျမက ကိုကို သေဆို သေ ရှင်ဆို ရှင် ကိုကို့စကားတွေဆို ကိုကို မျက်နှာအညိုမခံဘဲ ကိုကို့အတွက် အရာရာပေးဆပ်ခဲ့တာပါ.
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ ခနလေးပါပဲ ကိုကို. တကယ့်ကို ခနလေးပါပဲ. အဲ့ဒီညနေပေါ့ ကျမကို လာစောင့်နေတဲ့ ကိုကို့မျက်နှာက ပြိုတော့မယ့်မိုးလိုပဲ မှိုင်းညို့နေခဲ့တယ်. ကိုကို့ဘေးကို ကျမရောက်လာတာကိုတောင် ကိုကိုက သတိမထားမိနိုင်လောက်အောင် အတွေးတွေက ဟိုးအဝေးကိုရောက်နေခဲ့တာလေ.
"မိုး ကိုကို့ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လား ကိုကို့ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လားဟင်…"
ကျမရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ခေါင်းအပ်ပီး ကျမကို အားကိုးရာမဲ့ တွယ်ဖက်ထားတဲ့ ချစ်သူကို
ဘာကြောင့်ဆိုတာ မေးဖို့ထက် ကိုကို စိတ်ပေါ့ပါးသွားဖို့ကိုပဲ ကျမ ကြိုးစားခဲ့တာလေ.
ရင်ကွဲခဲ့တဲ့နေ့ရဲ့ အစပေါ့ ကိုကို. အဲ့ဒီနေ့က စီနီယာအမတစ်ယောက်နဲ့အတူ အင်တာဗျူးတခုကို ကျမ လိုက်သွားခဲ့တယ်. နိုင်ငံခြားက ပြန်လာပီး ဘွဲ့တွေ တစ်သီကြီးရခဲ့ပီး အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကုမဏီကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ MD မမ ငယ်ငယ်ချောချောလေးကို အမ အင်တာဗျူးတာကို ဘေးကနေ ကျမက ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေတုန်းမှာပဲ သူမရဲ့ အနောက်က ဓာတ်ပုံမှန်ဘောင်ကို ကျမ မြင်တွေ့ခဲ့တာလေ. တယောက်မျက်နှာကို တယောက်ကြည့်နေပီး လက်ချင်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မှန်ဘောင်ထဲက ချစ်သူစုံတွဲမှာ ယောက်ျားလေးက ကျမရဲ့ သိပ်ချစ်တဲ့ ကိုကိုပေါ့.
အဲ့ဒီနေ့က ကိုကို ကျမဆီကို ဖုန်းမဆက်ခဲ့ဘူး. ညဘက်ရောက်တဲ့အချိန်အထိ ကိုကို့ဆီက ဘာမက်ဆေ့ခ်ျမှ မရတဲ့အခါ ကျမ ဘယ်လိုမှ နေမရခဲ့ဘူး. ဖုန်းဆက်ဖို့ အားမွေးခဲ့ပီး ဖုန်းခွက်က ခလုတ်တွေကို နှိပ်ခဲ့မိတယ်.
ရင်ကွဲရမယ်လို့ သိရမယ်ဆို အဲ့ဒီဖုန်းကို ကျမ မဆက်ခဲ့ပါဘူး ကိုကို.
ခပ်တိုးတိုး ရယ်မောသံရယ်… ပီးတော့ “ဟဲလို ဘယ်သူနဲ့ပြောချင်လို့လဲ” အသံချိုချိုလေးတခု….
“ဘယ်သူလဲ မသိဘူး ဟန်နီ…. ဖုန်းခေါ်ပီး စကားမပြောဘူးကွယ်……”
အဲ့ဒီညက တစ်ညလုံး ကျမငိုခဲ့ရတယ်… မနက်အိပ်ရာနိုးတော့ ကျမရဲ့ မျက်လုံးတွေက မြင်မကောင်းတော့ အတူနေ အခန်းဖော်က အလုပ်မသွားဖို့ တားမြစ်ခဲ့တာလေ.
နောက်တစ်နေ့ ကိုကို အခန်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျမဘက်က ဘာပြင်ဆင်မှုမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး. ကျမ မျက်နှာကိုတောင် မကြည့်ဘဲ ကိုကို ထိုင်နေခဲ့တယ်. အဲ့ဒီနေ့ညက ဖုန်းဆက်တာ ကျမမှန်း ကိုကိုသိပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ဘာမှဖွင့်မပြောတဲ့အခါ ကျမကပဲ အားမွေးပီး ကိုကို့ကိုမေးခဲ့တယ်.
“တခုခုတော့ ပြောပါ ကိုကို သူနဲ့ ကိုကိုရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို မိုး သိချင်လို့ပါ…….”
“သူက ကို့ရဲ့ ချစ်ဦးသူပဲ မိုးရယ်… သူ့ကို ကိုသိပ်ချစ်ခဲ့တယ်… ကို့ကို ခွင့်မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့… သူ နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့အချိန် မိုးကို ကိုတွေ့ခဲ့တာပဲ… မိုးက သူနဲ့ သိပ်တူလွန်းတယ်… သူ့အစား………………………….”
စကားလုံးတွေ သိပ်ရက်စက်တဲ့ စကားလုံးတွေ……………..
ရက်စက်လိုက်တာ ကိုကိုရယ် ဒီအတိုင်း ကျမကို မရှင်းပြတာကမှ ကျမအတွက် ဖြေသိမ့်စရာ ရှိဦးမယ်.
အခုတော့ အစားထိုးဖို့ မလိုတော့ပါ… ချစ်သူပြန်ရောက်လာပီလေ အဲ့ဒီအတွက် ကျမကို မေ့ပစ်ရတော့မယ်.
ကျမကလဲ မေ့ပစ်လိုက်ရတော့မယ် ရင်ခွင်တခုလုံး ဟက်တက်ကွဲခဲ့တာပဲ ချစ်သူရယ်… ….
တစ်သက်မမေ့စရာ စကားလုံးတွေပါပဲ ကိုကို….
ကျမကို တခါတည်းနဲ့ ကိုကို သတ်ခဲ့တာပါပဲ..
ရှင်လျက်နဲ့ ကျမရဲ့ နှလုံးသား သေဆုံးခဲ့ရပီ ကိုကို…………
ဟင်းလင်းပွင့်ခဲ့တဲ့ရင်ခွင်တခုလုံးကို ကုစားဖို့ ကျမ အချိန်တွေအကြာကြီးအသုံးပြုခဲ့ရတယ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည့်မတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်. ချစ်တတ်လာအောင် သင်ပေးပီးမှ
အသည်းကွဲရအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူကို ဘယ်လိုအချိန်တိုင်းမဆို ကျမ မေ့ဖို့ကြိုးစားလဲ မေ့ဖျောက်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး…….
အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ ကျမအတွက် အကောင်းဆုံးအဖော်က ကျမရဲ့သူငယ်ချင်း ကိုလတ်ပင်….
ကျမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေတိုင်းကို ကျမကို ဖြစ်အောင် သူလုပ်ပေးခဲ့တယ်.
ကျမ တက်ချင်တဲ့ သင်တန်းတွေ. ကျမ လုပ်ချင်တဲ့ ရီပို့ဒ်တွေ သတင်းတွေ ဒါတွေကို ဖိဖိစီးစီးလုပ်နေတဲ့အချိန် မှာ
ကျမအတွက် လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အချက်အလက်တွေရော ရှာပေးခဲ့တဲ့အပြင်
အဖော်အဖြစ်နဲ့ပါ ကျမ ဘေးမှာ တစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တာပေါ့…..
သူ့ရဲ့ရင်ထဲကို အရှင်းဆုံးမြင်ရအောင် ကျမကို ပြခဲ့ပေမဲ့ ကျမကတော့ ကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ အသည်းနှလုံးကို သူ့ကို မပေးချင်ခဲ့ပါ……
အဲ့ဒီနေ့က ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုမှာ ကိုမင်းလွင်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်… ကိုမင်းလွင်က ကျမနဲ့ ကိုကို့အကြောင်းကို အစအဆုံးသိခဲ့တဲ့ ကိုကို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သူငယ်ချင်းပင်. ကျမက ကိုမင်းလွင်ကို ခပ်တည်တည်မျက်နှာပေးနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့ ကိုမင်းလွင်ဆီမှာ ကျမအတွက် ပြောစရာ စကားလုံးတွေ ရှိနေခဲ့တယ်.
“မိုးညရေ စကားအေးအေးဆေးဆေးပြောချင်တယ်ဟာ. အချိန်ခနလေးတော့ ငါ့ကိုပေးပါ… ဘာပဲပြောပြော ဖြစ်ခဲ့သမျှမှာ ငါက အကုန်သိခဲ့ရတာဆိုတော့ ငါ တခုခုတော့ နင့်ကို ပြောပြချင်တယ်……..”
ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် ငယ်ချစ်ဦးဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပဲ… အသစ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ကိုကိုက နောက်ဆုတ်ကျန်ခဲ့ရတယ်တဲ့လေ… သူမက မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပီး ကိုကို့ကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးခဲ့ပီးမှ လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တယ်တဲ့လေ…
“ဒီကောင် အသည်းကွဲကျန်ခဲ့တာပေါ့ဟာ.. ဒီတစ်ခါ ပိုကွဲတာကတော့ နှစ်ခါကွဲဖြစ်ခဲ့တာပဲ… နင့်ကို သူ သိပ်ချစ်တယ်… ဒါပေမဲ့ နင့်ကိုဖွင့်မပြောခဲ့တာက သူတို့နှစ်ယောက်မှာ လှိုင် နိုင်ငံခြားကိုမသွားခင်က ကတိထားခဲ့ကြတယ်….. အဲ့ဒီအချိန်မှာ နင့်ကို သူတွေ့တော့ တကယ်ချစ်ခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့ လှိုင်က ဒီအကြောင်းတွေကိုလဲ သိရော မြန်မာပြည်ကိုချက်ချင်းပြန်လာတော့တာပဲ… အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းက ဒီကောင် အရူးလိုပဲ.. ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး… အဲ့တာကြောင့် နင့်ကို ရက်ရက်စက်စက် စကားတွေ သူပြောခဲ့တာပေါ့…နောက်တော့ ဟိုတစ်ယောက်က ခနပဲနေပီး ပြန်သွားတယ်……..”
“သူနင့်ကို တောင်းပန်စရာတွေ ရှိလိမ့်မယ်ဟာ စကားလက်ခံပြောစေချင်တယ်… ဘာပဲပြောပြော ညည်း ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာ ငါလဲ အသိ သူလဲ အသိပဲလေ……”
ကျမရှေ့ကို ကိုကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ကို ကိုကို ပိန်သွားခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့ ကိုကို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ သေချာမှုနဲ့ တောက်ပနေတုန်းပဲ…
“အဟောင်းတွေ အသစ်မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး ကိုကို. မေ့လက်စနဲ့ ကျမ အကုန်မေ့လိုက်ပါပီ…”
“မိုးရယ် ကို မိုးကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ မိုးသိစေချင်တယ်… လှိုင်ပြန်လာမယ်ဆိုတာ သိတဲ့အချိန်မှာ ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ဘူး.... အဲ့တာနဲ့ပဲ မိုးကို ကို ရက်စက်ခဲ့မိတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကိုလဲ ဝဋ်လည်တာပဲ မိုးရယ်…. ကိုကို့ကို ခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုရင်တောင် မိုးဆီမှာ ကိုကိုက ပြန်လည်ရွေးချယ်ခွင့်တောင်းပါတယ် မိုးရယ်… ကို့ကို မိုး ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ ကိုသိတယ်.. ကို့အမှားတွေအတွက် မိုးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ပါရစေ မိုးရယ်……”
‘မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး … ကိုကို့ကို ကျမ မချစ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး…. ဒါပေမဲ့ ရွေးချယ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုလတ်ကိုပဲ လက်ထပ်မယ်’
တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ စကားလုံးတွေကြားမှာ ကျမ အသက်ပင် ရဲရဲမရှုဝံ့ခဲ့ပါ. ကိုကို့ရဲ့ မျက်နှာကိုလဲ စေ့စေ့မကြည့်ဝံ့. မုန်းလိုက်ပါတော့ ကိုကို. ကျမကို မေ့လိုက်ပါတော့. ကိုကိုပေးခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာက တစ်သက်စာခိုင်လုံပါတယ် ကိုကို…. ကိုကိုနဲ့ ကျမရဲ့ ချစ်ခြင်းကို အတိတ်မှာပဲ လှလှပပ ထားခဲ့တော့မယ်. အခုလက်ရှိကို ပြန်ဆွဲမခေါ်တော့ပါဘူး… ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း သိပ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နေ့ရက်လေးတွေကိုပဲ ပြန်သတိရတော့မယ် ကိုကို. အသည်းကွဲခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေကို ပြည်ဖုံးကားချလိုက်ပိ… ပြန်သတိမရချင်တော့ဘူး ကိုကို …….
ကျမရဲ့ ပြတ်သားတဲ့အငြင်းကို ပွေ့ပိုက်ပီး လှည့်ပြန်သွားတဲ့ ကိုကို့ရဲ့နောက်ကျောကို ကြည့်ပီး အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေခဲ့တယ်…..
ပြန်မရတော့တဲ့အရာတွေထဲမှာ အချိန်ရယ် နုပျိုခြင်းရယ် အချစ်တွေရယ် ပါဝင်တယ် ကိုကို… ဒါကို ကိုကို့ကို သိစေချင်ပါတယ်………..
ပြည့်စုံ (၁၅-၇-၂၀၀၉၊ ၁း၀၀ am)
at 8:23 AM Labels: ဝတ္ထုတို
nu August 2, 2009 at 9:45 AM
အရေးသားတွေက မိုက်ကိုမိုက်တယ် ကွဲလေ ကောင်းလေပေ ကွဲတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေ များများရေးပါ ကြိုက်တယ် သေကွဲကွဲရင်ပိုကြိုက်တယ် ဘာလို့လဲမသိဘူး ကွဲရင်ကိုကြိုက်တာ အလွမ်းဘဲခံစားချင်တယ် အချစ်ဆိုတာကို မခံစားချင်ဘူး ဟီး
Angel Shaper August 2, 2009 at 3:25 PM
ရော်.... အပေါ်က တစ်ယောက်ကတော့ ကွဲကို ကွဲရမတဲ့လေ။။။ ရက်စက်ပါပေ့ ကိုနေမင်းရယ်။။။။။
ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အရာတွေထဲမှာ အချိန်ရယ်၊ နုပျိုခြင်းရယ်၊ အချစ်ရယ်
အရမ်းကောင်းတယ်။ မိုးဆုံးဖြတ်တာမှန်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ မိုးနဲ့ သတိုး။
မေလေး August 4, 2009 at 10:34 PM
ရေးတတ်လိုက်တာ။ ကွဲနေတာကြီးဘဲ မရေးပါနဲ့ဟယ်။ ဒါပေမဲ့ မိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ငါထောက်ခံ့တယ်။
ချမ်းလင်းနေ August 8, 2009 at 9:32 AM
"မိုးည"များမှာ အချစ်ပြောက်ကို ရှာတုန်း.........
ရေးတတ်တယ်ဗျာ။ဖတ်တဲ့သူရင်ကို ခံစားမှု တစ်ခုကျန်အောင် ရေးသားထားတာဗျာ။ကောင်းတယ်။နောင်လဲ အားပေးနေဦးမယ်။
ချမ်းလင်းနေ August 8, 2009 at 3:52 PM
ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်ပြီး ဒီစာသားလေးကိုပဲ အထပ်ထပ်ရွတ် ကြည့်နေမိတယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဇာတ်ကောင်လေးတွေ ရင်ထဲမှာတောင် စွဲကျန်သွားတယ်။
စိတ်၏ဖြေရာ August 9, 2009 at 4:16 AM
purplemay August 13, 2009 at 6:52 PM